အူရီဒူးက ပြိုင်ဘက်ကင်းဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများကို မြန်မာပရိသတ်များထံအရောက် ယူဆောင်လာဖို့ Viu နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Viu ရဲ့ အာရှထိပ်တန်း ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အူရီဒူးကွန်ရက်နဲ့ဆို Premium Access ရရှိနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Viu ကို ဈေးကွက်ပေါင်း (၁၆) ခုမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ နေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူ သန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ တီဗီရှိုးများ၊ ရုပ်ရှင်များနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အာရှဈေးကွက်မှာ အထူးအောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ ထိပ်တန်းအင်တာနက်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားစံတော်ချိန်အတိုင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ Running Man ကဲ့သို့ လူကြိုက်များအစီအစဉ်များကို Viu မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များကိုလည်း ၁၀၀% မြန်မာ စာတန်းထိုးနဲ့ တစ်ဝကြီး ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အူရီဒူးသုံးစွဲသူမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ အခုဆိုရင် Viu ရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကို စာရင်းပေးသွင်းခ လုံးဝ (လုံးဝ) ပေးသွင်းစွာ မလိုဘဲ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေါင်းလုတ်ရယူ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Google Play Store (သို့) viu.com (သို့) My Ooredoo App ရှိ Link ကို ၀င်ရောက်ပြီး Viu ကို ရယူနိုင်ပါတယ်
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များအားလုံးကို အခမဲ့ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်
Premium User ဖြစ်နေဖို့အတွက် အူရီဒူးကွန်ရက်ပေါ်မှသာ အမြဲတမ်းသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်
My Ooredoo App ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန် *565# ကို ခေါ်ဆိုခြင်း (သို့) Google Play Store (သို့) App Store သို့ ၀င်ရောက်ပါ။
ကဲ ဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကို အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများနဲ့အတူ Viu မှာ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါစို့။
ကိုရီယားနိုင်ငံနှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ဦးဦးဖျားဖျားကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
Viu ဆိုတာ အာရှနိုင်ငံ (၅)နိုင်ငံရဲ့ (ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာ) အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းများ၊ TV အစီအစဉ်များ မြောက်မြားစွာထည့်သွင်းထားတဲ့ ထိပ်တန်းဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ရာနှုန်းပြည့်မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Viu app ကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရနိုင်မလဲ။
Viu app ကို Google Play Store တွင် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
လောလောဆယ် Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
Viu ကို My Ooredoo App မှတစ်ဆင့်မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။ My Ooredoo App ကိုဘယ်လို Download လို့ရပါသလဲ
*565#ကိုအူရီဒူးဖုန်းမှခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် My Ooredoo App ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ My Ooredoo App ကိုဖွင့်ပြီး Viu ကိုနှိပ်ကာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Ooredoo နဲ့ အသုံးပြုရင်ရရှိမဲ့ ခံစားခွင့်?
Viu application ကို Ooredoo Network (or) Ooredoo ရဲ့ Supernet Wireless broadband တဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Viu က ပရီမီယမ်ဇာတ်ကားလေးတွေကို အခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ကိုရရှိမှာပါ။ အကောင်းဆုံး Korean Variety Show များဖြစ်တဲ့ Running Man, Return of Superman တို့အပါအ၀င် တခြား အာရှရဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလေးတွေကိုလည်း အမုန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Internet အသုံးပြုခ Data charges ကိုတော့ အသုံးပြုတဲ့ Plan (or) Package အလိုက်ပဲ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ့်။
(Note: Ooredoo network မဟုတ်တဲ့ တခြား Operator Network မှာဆိုရင်တော့ Premium ကြည့်ရှုခွင့်လေးကို ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနေ်ာ)
Ooredoo ရဲ့ Viu premium အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲ?
Viu Application ကို Ooredoo Internet နဲ့ အသုံးပြုလိုက်ရုံနဲ့ Premium ကြည့်ရှုခွင်ကို အလွယ်တကူရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းလေးနဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေကို အမုန်းကြည့်နိုင်ပါမယ်။
My Ooredoo App ထဲမှာလည်း Viu Premium ကြည့်ရှုခွင့်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ My Ooredoo App ထဲဝင်ပြီး Viu Premium ကြည့်ရှုခွင့်ကို နှိပ်လိုက်ယုံနဲ့ အစီအစဉ်လေးကို ရယူလို့ရပါတယ်။
Data Package ၀ယ်ယူပြီးအသုံးပြုတာဆိုရင်တော့ ၀ယ်ယူထားတဲ့ Data package ထဲကပဲကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ။ Data Pack ဝယ်ယူထားခြင်းမရှိပါက သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်နှုန်းနဲ့ ဒေတာများကို ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Viu အသုံးပြုခွင့် အတွက် လုံးဝကောက်ခံထားခြင်းမရှိပါ။
Viu Premium အတွက်ပေးဆောင်ထားပြီးသားဆိုရင်ရော?
Viu Premium ကို သက်တမ်းကုန်တဲ့အထိပုံမှန်အတိုင်းကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ Ooredoo Internet နဲ့ အသုံးပြုနေသေးသရွေ့ Viu app ထဲက Premium ဇာတ်ကားလေးတွေကို ဆက်တိုက်ကြည့်နေလို့ရမှာပါ။ Ooredoo ရဲ့ Supernet Wireless broadband နဲ့လည်း Premium ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ooredoo network နဲ့ သုံးနေတာပေမယ့် Premium တွေကြည့်လို့မရဘူး?
အရင်ဆုံး အင်တာနက် လိုင်းကောင်းမကောင်းလေးတစ်ချက်လောက်စစ်ဆေးကြည့်ပေးပါ ( အူရီဒူးအင်တာနက်နှင့်သာ)
Viu App လေးကို ပိတ်လိုက်ပါ။ Recent ကနေ Viu Appကိုရှင်းပြီး Viu Appိုနောက်တစ်ခါ ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
Application Setting ထဲမှာ Viu App လေးကို Clear Cache လုပ်ပြီး ပြန်အသုံးပြုကြည့်ပါ။
Google Play Store မှာ Viu နောက်ဆုံးထွက် Version အသစ်လးကို ဒေါင်းပြီး အသုံးပြုထားဖို့တော့လိုပါ့မယ်။
အူရီဒူး နှင့် Viu ကိုအသုံးပြုနေသော်လည်း My Ooredoo App မှတစ်ဆင့် Viu ကိုကြည့်ရှုမရနိုင်ပါ။အဘယ်ကြောင့်နည်း။
အူရီဒူးကို SIM Slot-1 တွင် အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်ကောင်းနေပါစေ။ Data Saving Mode ကိုလည်း ပိတ်ထားပေးပါ။ Browser ကို Cache Clear လုပ်ပြီး ပြန်လည်ဖွင့်ကြည့်ပေးပါ။ အသုံးပြုမရပါက Viu App ကို Google Playstore မှ Download ရယူကာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Viu App ကို အသုံးပြုနေပါက အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို Menu ရှိ ကိုယ့်အကောင့်တွင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ My Ooredoo App မှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုနေပါက Menu ရှိ My Plan တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Viu-Ooredoo အစီအစဉ်ကို ကိုယ့်အကောင့်တွင် မမြင်ရပါက မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်မည်နည်း။
အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးနေစဉ် အူရီဒူးနှင့်သာ အသုံးပြုပေးပါ။ Sim ကို No.1 တွင် ရှိနေပါစေ။ Premium Access ကိုမြင်တွေ့နေပါက အစီအစဉ်ကို ရရှိနေသည်ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတ်ကား တိုက်ရိုက်ကြည့်ဖို့ အတွက်ပဲလား? Download ရောလုပ်လို့ရလား? ဘယ်နကားလောက် Download လုပ်လို့ရမှာလဲ?
Ooredoo Internet နဲ့ Viu app လေးထဲက ဇာတ်ကားတွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုတာရော download လုပ်တာရော အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ဇာတ်ကား အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် အမုန်းဒေါင်းပြီး အမုန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (Download ကြည့်ရှု့မှု့ကို Viu Andriod Application အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်)
Viu application ထဲက ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ မြှားအဖြူလေးကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေကို ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Download လုပ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ဘယ်လောက်ထိကြည့်လို့ရလဲ?
သက်တမ်းကတော့ ၇ရက်ဖြစ်ပြီး ၇ရက်မြောက်နေ့မှာ Ooredoo Network အသုံးပြုနေသေးသမျှ Renew ပြန်လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ့်။ ပြန်ဒေါင်းပေးစရာမလိုအပ်ပါ။
Viu ကို App (သို့) Portal မှတစ်ဆင့်ကြည့်သော်လည်း Premium Access ကိုမရပါ။
ဖွင့်ထားသော App (သို့) Portal ကို Cache Clear လုပ်ပြီး ပြန်လည်ဖွင့်ကြည့်ပေးပါ။
Viu ကြည့်သော်လည်း Premium Access မရပါ။
Viu ကို အူရီဒူး Network ဖြင့်ကြည့်ရှုမှသာလျှင် Premium Access ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ooredoo ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ဆိုရင်
ဒီအစီအစဉ်လေးကို Ooredoo Myanmar Internet နဲ့ အသုံးပြုသူများသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ooredoo network နဲ့ Internet အသုံးပြုနေသ၍ Viu premium အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (Mobile data နဲ့ Supernet Wireless Broadband) 2မျိုးလုံး အတွက်လဲအကြုံးဝင်ပါတယ်။
Viuမှ Premium ကားများကို Viu App မှာကြည့်ရှု့နိုင်သလို My Ooredoo App မှာလဲကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ထပ်မံအကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့ အချိန်ထိ ဒီအစီအစဉ်ကိုပါဝင်လို့ရပါတယ်။
Ooredoo နဲ့ Viu ရဲ့ အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ အတွက် ooredoo.com.mm နဲ့ com ရဲ့ Terms & Conditions များကို သဘောတူပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Ooredoo Myanmar မှ Update အကြောင်းအရာများကို အချိန်နဲ့တပြေးညီအသေးစိတ် website မှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။